» राशिअनुसार आजको दिन कस्तो छ ?
राशिअनुसार आजको दिन कस्तो छ ?
२६ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ०७:३०
घरमा शुभ कामहरू सम्पन्न गर्न योजनाहरू बनाइनेछ । आज, दिनको अधिकांश समय खुसियाली र परिवारसंग मनोरञ्जनमा खर्च हुनेछ । हजुर थकित र व्यस्त दिनचर्याबाट राहत पाउनुहुनेछ । आफ्नो उत्साह र ताजा महसुस गर्नुहुनेछ ।
घरको वातावरण रमाइलो र मेलमिलाप रहनेछ । प्रेमी / प्रेमिकालाई भेट्ने अवसर मिल्छ । स्वास्थ्य- कुनै पनि प्रकारको जोखिम लिनबाट बच्नुहोस् , ध्यानपूर्वक गाडी चलाउनुहोस् चोटपटक लाग्ने खतरा हुनसक्छ । भाग्यशाली रंग – रातो र भाग्यशाली संख्या १ रहनेछ ।
पारिवारिक जिम्मेवारीहरूको कारण तपाईं व्यापारमा धेरै ध्यान दिन सक्नुहुन्न तर सहकर्मीहरूको सहयोगमा, गतिविधिहरू सहज रूपमा चल्नेछ । मेसिनरी, कारखाना आदिको सम्बन्धमा व्यापारमा केहि समस्या हुनसक्छ ।
पति र पत्नीले एक अर्काको समस्यालाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछन्, तर कुराकानीको अभावले गर्दा एक अर्काप्रति केही चिदचिदापन हुनसक्छ । स्वास्थ्य: खुट्टा र शरीर दुखाइ हुनसक्छ ।
यात्रा सम्बन्धित योजना गर्न सकिन्छ यात्राको समयमा, स्वास्थ्य ख्याल राख्नुपर्छ । पहिलेका ज्ञात साथीहरूसँग भेट अचानक हुनसक्छ । तपाईं आफन्तहरूसँग समय बिताउने मौका पाउनुहुनेछ जस मार्फत दुबै पक्षहरूले एक अर्काको समस्या समाधान गर्न र एक अर्काको समस्याहरू बुझ्न प्रयास गर्न सक्दछन् ।
बच्चाको कुनै गतिविधिबारे चिन्ता हुनसक्छ र यो समस्यालाई शान्तिपूर्वक समाधान गर्नु राम्रो हुन्छ । रिसले चीजहरूलाई झनै नराम्रो बनाउनसक्छ । आज तपाईंको खर्चहरूमा नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुका लागि दिनको शुरुवात गाह्रो हुन सक्छ, तर तपाईका लागि यो काम पूर्ण हुन गइरहेको छ । अफिसमा बेकारका गतिविधिहरू गर्नुको सट्टा आफ्नो काममा ध्यान दिनुहोस् ।
प्राकृतिक र खाद्य उत्पादनसँग सम्बन्धित मानिसहरूले लाभहरू देख्नेछन् । ग्राहकसँग कारोबार गर्नु अघि, पैसाको लेनदेनको बारेमा विस्तृत छलफल गर्नु महत्वपूर्ण छ नत्र पछि समस्या हुन सक्छ।
वित्तसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू विचार गरिनेछ र तपाईले यसको सकारात्मक परिणाम पनि पाउनुहुनेछ । केहि समयको लागि चलिरहेको तनाव कम हुनेछ, जसको कारण दिमाग प्रसन्न रहनेछ । सम्पत्ती सम्बन्धी काम पाउने सम्भावना पनि छ।
व्यापारमा सबै काम सहजै जान्छ । कर्मचारीहरूको गतिविधिलाई वेवास्ता नगर्नुहोस् । एक सहकर्मीको नकारात्मक दृष्टिकोणले समस्या पैदा गर्न सक्छ । काममा तपाईंको लक्ष्य पूरा गरेर, पदोन्नतिको अवसरहरू पनि भइरहेको छ ।
तपाईको सम्भाव्यताको ज्ञान पाउँदै, तपाईले यसलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुपर्नेछ । आज तपाईंले काममा पूरा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ, किनकि तपाईंलाई दिइएको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण छ र यसमा गरिएको गल्तीको प्रभाव कामसँग सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरूमा ठूलो हुनसक्छ, त्यसैले तपाईं होशियार हुनुपर्दछ ।
रोजगार खोज्नेहरूले आफ्ना वरिष्ठहरूबाट उचित सञ्चार कायम गर्न आवश्यक रहन्छ । पार्टनरहरूले समस्या सुल्झाउँदा एक अर्कोको लागि आदर र प्रेम बढ्नेछ । स्वास्थमा कम्मरमा दुखाइ र कम्मरमा कडापन महसुस हुनसक्छ ।